mp3 ဖွင့်ရန်စာရင်းများကို mpXNUMX သို့မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း အသုံးချ | ငါက Mac ပါ
YouTube playlists တစ်ခုလုံးကို mp3 သို့ download လုပ်ရန်
အသုံးချ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 12/10/2019 19:24 | လဲ tutorial
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အနေဖြင့်ကနေဗွီဒီယိုတစ်ခု၏ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ကြပြီ YouTube ကို အမှန်တော့၊ သင့်မှာမည်သည့်အက်ပ်ကိုမျှတပ်ဆင်စရာမလိုပဲလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိနေသောကြောင့်၎င်းကိုသင်အောင်မြင်ခဲ့သည် မက် သို့သော်သင်သည်သီချင်းစာရင်း ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀ သို့မဟုတ်အပုဒ် ၁၀၀ ၏သီချင်းစာရင်းကိုကူးယူလိုပါကမည်သို့ပြုမည်နည်း။ သင်အဲဒါကိုတစ် ဦး ချင်းစီလုပ်သလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒီနေ့ငါပြောမယ် ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး YouTube playlists တစ်ခုလုံးကို mp3 သို့မည်ကဲ့သို့ download ရမည်နည်း.
1 ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသင်၏ Mac ပေါ်ရှိဂီတအားလုံး
1.1 YouTube မှ MP3 သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသင်၏ Mac ပေါ်ရှိဂီတအားလုံး
သငျသညျအကြှနျုပျကို geek အဘို့အယူပြီးငါ့ကိုဝေဖန်လိမ့်မည်ဟုအန္တရာယ်မှာတောင်မှငါမနေ့ကငါ Eurovision 2015 ၏သီချင်းများအားလုံးကိုနားထောင်လိုသောဆန္ဒနှင့်အတူနိုးလာတယ်ဒါကြောင့်ငါဝင် YouTube ကို ပြီးတော့ဒီနှစ်သမိုင်းဝင်ပွဲတော်မှာပါ ၀ င်မယ့်သီချင်းအားလုံးနဲ့အတူတရားဝင်သီချင်းစာရင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့်သီချင်းကသီချင်းတစ်ပုဒ်မသွားချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်စပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ YouTube မှ MP3 သို့ ကဖွံ့ဖြိုး လူအရာနှင့်အတူတစ် ဦး စစ်မှန်အံ့သြစရာ YouTube playlist တစ်ခုလုံးကိုသင်ချက်ချင်း download လုပ်နိုင်ပါတယ်သင်၏ Mac, iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod မှအသံများကိုခံစားရန်။ ပြီးရင်၎င်းကို iTunes library ထဲကိုအလိုအလျောက်ထည့်ပေးမှာပါ။
YouTube မှ MP3 သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သင်စာရင်းဖွင့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် YouTube ကို ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ "+" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် URL ကိုကူးယူပြီး app ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းအားလုံးပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်အောက်သို့ညွှန်ပြသောမြားတစ်ခုနှင့်အတူဖော်ထုတ်ထားသောခလုတ်ကို နှိပ်၍ playlist တစ်ခုလုံးကို download ချရန်ရိုးရိုးလေးနှိပ်ပါ။
YouTube မှ MP3 မီဒီယာလူ့သို့
ဒါ့အပြင်« Preferences »မှ YouTube မှ MP3 သို့ သင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း downloads အများဆုံးအရေအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် download list များအားလုံးပြီးဆုံးသွားသည်နှင့် app သည်၎င်းကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်ဖိုင်တွဲ၊ iTunes ရှိ playlist စာရင်း (စာရင်းတစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးသည်) ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ « MediaHuman မှဒေါင်းလုပ်ချသည်»), output format နှင့်သင်ပင် playlist စာရင်း၏ URL ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်စတင်သည်ကိုသင်ညွှန်ပြနိုင်ပြီးသင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပိုလွယ်လိုက်တာ? မဖြစ်နိုင်ဘူး ထိုသို့ထိပ်တန်းရန်ဖြစ်ပါသည် လုံးဝအခမဲ့ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ကြိုးစားပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဤစာမူကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္inမှအကြံဥာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်သင်ခန်းစာများစွာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် လဲ tutorial။ မင်းမှာသံသယရှိတယ်ဆိုရင် လျှောက်ထားသောမေးခွန်းများ သင်၌ရှိသောမေးခွန်းများအားလုံးကိုသင်မေးမြန်းနိုင်ပြီးအခြားအသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏သံသယများကိုရှင်းလင်းနိုင်အောင်လည်းကူညီနိုင်သည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်နှင့်အခမဲ့ download | လူ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » YouTube playlists တစ်ခုလုံးကို mp3 သို့ download လုပ်ရန်
Apple Remote Desktop လိုင်းသည်ဗားရှင်း ၃.၈.၄ သို့ရောက်ရှိသည်
OS X အတွက်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းအားလုံး